विजय गच्छदारले एकाएक अग्रता लिएपछि नारा लगाउन कुरेर बसेका बाम कार्यकर्ताले यसो गरे ! — Imandarmedia.com
विजय गच्छदारले एकाएक अग्रता लिएपछि नारा लगाउन कुरेर बसेका बाम कार्यकर्ताले यसो गरे !
सुनसरी क्षेत्र नम्बर ३ को जारी मत गणनामा नेपाली काँग्रेस नेता विजयकुमार गच्छदारले अग्रता लिएका छन् ।
सुरुवातदेखि नै अग्रता लिएकी एमाले नेतृ भगवती चौधरीलाई गच्छदारले पछि पारेका हुन् । मंगलबार साँझदेखि मतान्तर घटाएका गच्छदारले भरखरैबाट अग्रता लिएका छन‍् । तर, अग्रता थोरै मतले भएकाले त्‍यसै भन्न नसकिने बताइन्छ ।
पछिल्लो परिणामअनुसार विजय गच्छदारले ३३७२० मत प्राप्त गरेका छन् । केही समयसम्म अग्रता लिइरहेकी नेतृ भगवती चौधरीले ३३५५० मत प्राप्त गरेकी छन् ।
गच्छदारले अग्रता लिएसँगै विजय जुलुको लागि मत गणना बाहिर जम्मा भएका एमाले-माकेका कार्यकर्ताहरु घरघर हिडेका छन् भने चौधरी तनावमा परेकी छिन । एमाले-माकेका कार्यकर्ताहरु घरघर हिडेपछि अरु चकित परेका छन् ।
यसैबीच उक्त क्षेत्रमा मतगणनाको क्रममा सोमबार मतपत्रमा २० रुपैयाँको नोट भेटिदा विवाद निस्किएपछि मतगणना कार्य रोकिएको बताइए पनि मतगणना रोकिनुको खास कारण भने अर्कै रहेको बुझिएको छ ।
बाम गठबन्धनबाट उम्मेदवार बनेकी एमालेकी भगवती चौधरीले मतपेटिका बदलिएको आरोप लगाएकी छिन् । सुनसरीको जिल्ला समन्वय समितिको परिसरमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै चौधरीले केही मतपेटिकामा शंका उब्जिएकाले त्यसबारे खोजी गर्दा तयारी मुजुल्का र केही थान मतपेटिकाको सिल झाडीमा भेटिएको बताइन् ।
प्रशासनका केही अधिकारीले दिएको सूचनाकै आधारमा खोजी गर्दा यस्तो भेटिएको उनले बताएकी छिन् । चुनाव जित्न काँग्रेसले धाँधली गरेको चौधरीले आरोप लगाएकी छिन् । उनले भनिन्, ‘निष्पक्ष रुपमा निर्वाचन आयोगले चुनाव गराउन सकेन । आयोगले नै खटाएका कर्मचारीले फटाइ गरे ।’
चौधरीले न्यायको लागि आफू अदालत जाने समेत बताइन् । उनले सुनसरीका मुख्य निर्वाचन अधिकृत पुरुषोत्तम प्रसाद ढकाल र प्रहरी प्रमुख एसपी विद्यानन्द माझीको भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठाएकी छिन् ।
चौधरीले शंकाष्पद रहेका ९ वटा मतपत्रको सिरियल नम्बर हेर्न पाउँ भन्दै माग गरेकी छिन् । तर, निर्वाचन अधिकृत ढकालले निर्वाचन कानुन विपरित उक्त सिरियल नम्बर हेर्न नमिल्ने भनेपछि विवाद उत्पन्न भएको बताइएको छ । शिल कैँचीले काटिनुपर्नेमा हातले चुँडाइएको अवस्थामा रहेको चौधरीले बताएकी छिन् । शिलको नम्बरसँग मेल खाने मुजुल्कासमेत झाडीमा सँगै भेटिनुले मतपेटिका परिवर्तन गरी धाँधली गरिएको पक्का भएको उनको आरोप रहेको छ ।
यसअघि नेपाली काँग्रेसका उम्मेदवार विजय कुमार गच्छदारले पत्रकारसँग कुरा गर्दै चौधरीले धाँदली गर्न खोजेको आरोप लगाएका थिए । गच्छदारले सोमबार मतगणना रोकिएको समयमा चौधरीले गतगणनामा धाँदली गर्न गैरकानुनी कार्य गरेको आरोप लगाउँदै तुरुन्त मतगणना सुरु गर्न माग गरेका थिए ।
यसबारे सुनसरीका मुख्य निर्वाचत अधिकृत पुरुषोत्तम ढकालले कुनै प्रतिकृया दिन चाहेनन् ।
यसैगरी उता कैलाली क्षेत्र नम्बर २ बाट नेकपा एमालेका झपटबहादुर रावल निर्वाचित भएका छन्। रावलले प्रतिस्पर्धी उम्मेदवार कांग्रेसका मोहनसिंह राठौंरलाई १८ सय ४४ मतको अन्तरले हराएका हुन्।
हालै सार्वजनिक भएको अन्तिम मत परिणाममा रावलले २५,१५७ मत पाए भने नेपाली कांग्रेसका राठौरले २३,३१३ मत पाए। यो सँगै एमालेले प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फ ८० सिट जितेको छ।
त्यसतै सर्लाही ४ मा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार अमरेशकुमार सिंह विजयी भएका छन्। उनी १५३९ मतान्तरले विजयी भएका हुन्।
उनले २९६७५ मत पाएका छन् भने राजपाका उम्मेदवार राकेश कुमार मिश्रले २८१३६ मत प्राप्त गरेका छन्। प्रतिनिधि सभातर्फ ४ सिट भएको सर्लाहीमा यसपटक कांग्रेसले १ सिट मात्र जितेको छ।
यस्तै स्याङ्जा क्षेत्र नम्बर १ बाट वाम गठबन्धनका एमाले उम्मेद्वार नारायण प्रसाद मरासिनी विजयी भएका छन्। उनले नेपाली कांग्रेसका राजु थापालाई ११ हजार भन्दा बढी मतले हराएका हुन्।
निर्वाचन अधिकृतका अनुसार स्याङ्जा १ को अन्तिम मत परिणाम अनुसार मरासिनीले ३९ हजार ४३३ मत पाएका छन् भने नेपाली कांग्रेसका थापाले २८७३१ मत पाएका छन्।
यो क्षेत्रको प्रदेशसभातर्फ क मा माओवादी केन्द्रका दीपक थापाले १७३९२ मत पाएर निर्वाचित भएका हुन् भने ख मा एमालेका मीनप्रसाद गुरुङ २०२४८ मतसहित निर्वाचित भए।
२०७४ मंसीर २७ गते प्रकाशित
निर्वाचन विशेष सम्बन्धित
बिहान ८:२२ सम्मको ताजा अपडेट, समानुपातिकमा यस्तो छ रोमाञ्चक प्रतिस्पर्धा !
एक्लै सरकार चलाउनेबारे एमालेभित्र गोप्य छलफल सुरु, माओवादी केन्द्रभित्र के हुँदै छ ?
राति १०:४५ को ताजा अपडेट- गच्छदारले ह्वात्तै मतान्तर घटाए, चौधरीको अवस्था यस्तो छ
८:२५ मा गच्छदारको क्षेत्रबाट आयो रोचक खबर, ह्वात्तै मतान्तर घटेपछि चौधरी यस्तो तनावमा !
४:३५ मा विजयकुमार गच्छदारको क्षेत्रबाट आयो यस्तो खबर, चाैधरीकाे ढुकढुकी बढ्याे !